Nepalistudio » कर्णेलको घरमा सिपाहीको शव ! कर्णेलको घरमा सिपाहीको शव ! – Nepalistudio
कर्णेलको घरमा सिपाहीको शव !
नेपाली सेनाको कर्णेल सुशीलकुमार थापाको इमाडोलस्थित निजी निवासमा घरेलु कामदार बनाई खटाइएका एक सिपाही मृत फेला परेका छन् । उनी झुण्डिएको अवस्थामा शनिबार राती फेला परेका थिए । जनप्रहार साप्ताहिकले समाचार छापेको छ ।
महानगरीय प्रहरी वृत्त सातदोबाटोका प्रमुख डिएसपी गौतम मिश्रले भने,‘सोमबार पीडितका तर्फबाट जाहेरी आएको छ । जाहेरीमा हत्या वा अन्य विषय भनिएको छैन ।’
तर शुक्रबार रातीसम्म आफ्नी पत्नीसँग कुराकानी गरेका सिपाही तामाङले कर्णेल थापाको घरमा आत्महत्या गर्नुको कारण भने प्रहरीले खोजेको छैन ।
मानौ, यो आत्महत्या नै हो तर ड्युटीमा रहेका जवानले कर्णेलको घरमा झुन्डिनुपर्ने अवस्था कसरी आयो, खोज्नुपर्दैन ? डिएसपी मिश्र भन्छन्,‘धेरै कुरा पोष्टमार्टम रिपोर्ट आएपछि थाहा हुन्छ । तर, यो कोणबाट पनि खोजीनीति हुनुपर्ने हो । अवस्थाअनुसार हामी खोजी गर्नेछौं ।’
तामाङको शव प्रहरीको निगरानीमा झुण्डिएको अवस्थामा नै फेला पारी मुचुल्का उठाएको बताएका उनले मृतक परिवारलाई जानकारी दिन र भक्तपुरको घर पुग्नका लागि भने कर्णेल थापासहितका सैन्यहरूले सहयोग गरेको बताए ।
तामाङको शव पोष्टमार्टमका लागि पाटन अस्पताल लखनखेलमा राखिएको छ । रिपोर्ट आउन केही दिन लाग्नेछ ।